Fambolena Ballindrum - IntoKildare
Ballindrum Farm B & B nahazo loka dia miorina amin'ny faritra misy hatsaran-tarehy any ambanivohitra atsimon'i Kildare, adiny iray miala an'i Dublin, toerana tsara hijerena an'i Kildare.
Eo afovoan'ny maintso maitso mihodina, Ballindrum Farm B & B dia 5 minitra miala ny M9. Miaraka amin'ny fomba fijerin'ny carte postales, ity toeram-ponenana ity dia eo amin'ny toeram-piompiana ronono miasa ary fitsidihana maimaimpoana maimaimpoana no azo alefa amin'ny fangatahana.
Beech Lodge dia manolotra safidy fampiantranoana mihaja kintana efatra. Azon'ny seza misy kodiarana feno misy efitra fatoriana roa, ensuite roa ary kambana misy fandroana azo alefa amin'ny sezakodia.
Ballindrum Farm koa dia afaka mikarakara vondrona mitady fijanonana mamelombelona miaraka amin'ny dite sy scone namboarina tany an-trano. Azo zahana ihany koa ny fitsangatsanganana amin'ny toeram-piompiana ary tokony hamandrika mialoha.
Bed & Breakfast, Lakozia kely, Mpinamana, 4 Star, Athy